Ungakhohlwa ku-inthanethi ekumaketheni kwakho okungaxhunyiwe ku-inthanethi! | Martech Zone
Ungakhohlwa ku-inthanethi ekumaketheni kwakho okungaxhunyiwe ku-inthanethi!
NgoLwesithathu, Juni 11, 2008 NgeSonto, uDisemba 10, i-2017 Douglas Karr
Ukuziphatha kwabathengi abakwi-inthanethi sekubaluleke kakhulu kubakhangisi be-inthanethi, kepha kuphuthelwe ikakhulu maqondana nezinhlangano ezingaxhunyiwe ku-inthanethi. Izinkampani eziningi ezinezitolo zokuthengisa, kanye nezitolo eziku-inthanethi, ziphatha izethameli ezimbili ngokwehlukana, zilahlekelwe yithuba elihle lokukhomba nokulandela enye.
Advanced analytics izinhlelo zokusebenza ezinjengeWebTrends, i-Coremetrics, ne-Omniture ziphathwe kakhulu njengezinhlelo zokubika kepha zibamba idatha yabathengi ebalulekile engahlukaniswa futhi isetshenziswe kuzivakashi ezithile ngaphakathi kwedatha yakho.
Abahlinzeki Besevisi Ye-imeyili futhi ibamba inani ledatha yokuziphatha. Kuhlanganiswe ne-Analytics lezi zinhlelo zingalandelela ukusebenza komthengi kusuka ngokuchofoza kuye ekuguqukeni. Ukuphusha izivakashi zakho ku-inthanethi kunikeza indlela elula yokuqoqa le datha. Kokunikezwayo kwakho, kuyasiza ukufaka ukhiye oyingqayizivele wekhasimende lakho ngalinye.
Njengoba nje ungafaka ikhodi yomkhankaso kucezu lwemeyili oluqondile, ukwakha ikhasi lokufika ukuze uqoqe ukhiye wamakhasimende oyingqayizivele kuyindlela ephumelelayo yokulandela lowo obhalisile. Leli khasi lokufika lingahlinzeka ngemvume yokungena ngemvume ekumaketheni okungeziwe. Ukhiye ungangezelelwa ekugcineni kwekheli lewebhu (i-URL) nge-querystring (http://mycompany.com/'s=12345) bese ugcinwa kukhukhi lapho kungalandelwa khona ngokukhethekile kusayithi lakho lonke.
Imizi enokuziphatha okwandisiwe kwe-inthanethi ingahlukaniswa kusuka kuposi lakho eliqondile nakuhlu lokuthengisa ngocingo, futhi esikhundleni salokho, ithunyelwe nge-imeyili - inikeze umlayezo oqondisiwe, ofike ngesikhathi ngezindleko eziphansi kakhulu. Kubalulekile ukuqaphela lokho Imithetho yenhlangano ye-CAN-SPAM faka isicelo futhi iseluleko esihle kakhulu ukuqoqa amakheli e-imeyili ngokuzithandela futhi usebenze nomuntu onedumela elihle Umhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili enikezela ngezinsizakalo zokulethwa kanye nokuzikhipha ohlwini ukuze unqandwe ezinkingeni.
Ungakhohlwa ukuthi imizamo yakho yokumaketha ingabuyisela emuva nama-imeyili akho wokuthengiselana ngezinkukhu. Ama-imeyili okwenziwe noma yimaphi ama-imeyili alindelwe njengempendulo evela kumthengisi. Izibonelo ezimbalwa ukukhokha kanye / noma ukuthenga imilayezo yokuqinisekisa. Uma inkampani yakho ikhokha online, ulahlekelwa yithuba eliyinhloko nge-premium real estate ukwenza i-upsell noma ukunikezwa okungeziwe!
Uma umlayezo empeleni ungowokuthengiselana, akudingeki ukuthi i-CAN-SPAM isebenze. Vele uqiniseke ukuthi awuzihlanganisi izinto eziza kuqala njengoba ungagcina unenhlawulo impela. Ukumaketha nge-imeyili nakho kunikeza okuqukethwe okunamandla ngokususelwa ekuhlukaneni kwabathengi. Lokhu kukuvumela ukuthi uguqule umyalezo noma isithombe se-imeyili ngokususelwe kubabhalisile bakho.
Umlayezo emndenini ngokungafani nomfundi wasekolishi ungaba nama-verbiage nezithombe ezihluke ngokuphelele - kepha uphume nge-imeyili efanayo! Izixhumanisi eziku-imeyili yakho zingalandelelwa zibuyele emuva ekhasini lokufika noma isayithi lapho amasistimu wokuphathwa kokuqukethwe nawo anikela ngokuqukethwe okunamandla. Le datha ingabaluleka kakhulu kubakhangisi futhi!
Amandla wokuhlanganisa izivakashi zakho eziku-inthanethi ngemininingwane yabantu yithuba elihle kakhulu lokunikeza abakhangisi abazoba namaphrofayili nokuhlaziywa okuhle kwabantu - futhi kuzobiza kancane futhi kunembe kakhulu kunezinsizakalo eziku-inthanethi ezenza okunikela okufanayo.
Cabanga ngemithombo emibili eyengeziwe yedatha yedatha yakho: Web Analytics futhi imeyili Marketing. Sebenzisa leyo datha ekumaketheni kwakho okungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi uyihlanganise nemizamo yakho ye-imeyili Marketing! Uzokonga ithani lemali ekuposweni okukhulayo futhi ukwazi ukukala imiphumela esheshayo online.
Tags: Ama-Analyticsi-can-spamizisekelomail ngqoimeyiliumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliespukukhishwaukumaketha kwendabukoimvu
Douglas Karr Wednesday, June 11, 2008 Sunday, December 10, 2017
Kungani iTypepad yenze i-WordPress Anti-Spam Plugin?
I-MBP: Umhlinzeki we-Micro-Blogging and Protocol
UJun 13, 2008 ngo-6: 47 AM
Kuyahlekisa akunjalo; imvamisa abathengisi basebenzisa indlela efanayo ekukhangiseni kwabo. Izabelomali zibekwa kusengaphambili futhi zisekelwe ekuthatheni indlela efanayo njengakuqala. Kodwa-ke, ingabe ukucabanga okuhlakaniphile akudingeki? Ngakho-ke ngabe isu kufanele liguquke kulokhu okufanele kwenziwe noma okungenziwa manje? Sinethuba lokudlala ngenhlanganisela enkulu kakhulu yemidiya yemikhankaso yethu ehlanganisiwe futhi umlando usikhombisa ukuthi ngongqondongqondo bokudala abavuna imivuzo yokufeza izinhloso zabo.
Ezinkampanini, nasembonini, ukuziqhenya ngezinto ezintsha akumele kube ngumsebenzi onzima ukwenza izinto ezintsha.